ပိုးမွှားအရွက်များနှင့် Yanlikang တို့ကိုဘက်တီးရီးယားရောဂါနှင့်ပိုးမွှားများကူးစက်ခြင်းကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်း။
၁။ ရည်မှန်းချက် - လေ့လာမှုအရပိုးမွှားအပင်သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် Yanlikang တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် Escherichia coli နှင့် salmonella ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအတွက်အကျိုးရှိသည်။ Mulberry သစ်ရွက်ထုတ်ယူမှုနှင့် Yanlikang တို့၏ညှိနှိုင်းအသုံးပြုမှုထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုရန်ဤလက်တွေ့အသုံးချမှုသည် ...
တင်သောကြက်များ၏ဖက်တီးအသည်း syndrome ရောဂါအပေါ်ပိုးစာအရွက်ထုတ်ယူ၏လက်တွေ့လျှောက်လွှာ
၁။ ရည်မှန်းချက် - လေ့လာချက်များအရ Mulberry သစ်ရွက်ထုတ်ယူမှုကအမြင်အာရုံကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပါဝင်မှုကိုထိန်းညှိပေးခြင်း၊ ဒီလက်တွေ့လျှောက်လွှာ validation ကိုစမ်းသပ်မှုအထူးသ carri ...
Lens Hens ရှိဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများအတွက်ပိုးစာအရွက်များထုတ်ယူခြင်းကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်း
၁။ ရည်မှန်းချက် - ပိုးစာအရွက်ထုတ်ယူမှု၏ခိုင်မာသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဂုဏ်သတ္တိများကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်ဤလက်တွေ့အသုံးချမှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရှိသည့်တင်သောကြက်အုပ်စုတစ်စုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂။ ပစ္စည်းများ - ပိုးစာအရွက်ဖြူ (DNJ ပါဝင်မှု ၀.၅%) သည်။ ..
၁။ ရည်မှန်းချက် - ပိုးစာအရွက်ထုတ်ယူမှု၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဂုဏ်သတ္တိများကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်ဤလက်တွေ့အသုံးချမှုအတည်ပြုစမ်းသပ်မှုသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုရှိသည့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောကြက်များ၏အုပ်စုတစ်စုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 2. ပစ္စည်းများ: H မှပေးအပ်ပိုးစာအရွက်ထုတ်ယူ (DNJ အကြောင်းအရာ 0.5%), ...
Geneham Phytopro ၏ဆိုးကျိုးများသည်မျိုးစေ့ကြဲသူများ၏နို့စို့ gland နှင့်ကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းတွင်မွေးကင်းစကလေးများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ
၁။ ရည်မှန်းချက် - PX511 ဖြည့်စွက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ် ၀ န်ဆောင်အစာနောက်ကျသောမျိုးစေ့များ (၈၅ ရက် - ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း) ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုလေ့လာရန် ၃၀ ရက်ဆက်တိုက်အစားအသောက်ကုသမှုကိုမွေးဖွားခြင်းနှင့်နီးစပ်သောမျိုးစေ့ ၃၀ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂ ။